सामसङका अत्याधुनिक सुविधाका मोबाइल नेपाली बजारमा,मूल्य कति ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सामसङका अत्याधुनिक सुविधाका मोबाइल नेपाली बजारमा,मूल्य कति ?
काठमाडौं । सामसङ नेपालले हालै इन्फिनिटी डिस्प्लेको साथ नयाँ स्मार्टफोनहरू ग्यालेक्सी ए सिक्स तथा ए सिक्स प्लवस नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यो नयाँ स्मार्ट फोन प्रभावशाली रहेको छ । ए सिरिज स्मार्टफोन मेटल युनिबडी तथा स्लीक डिजाइनको साथ बजारमा ल्याइएको छ ।
ए सिक्स प्लवसमा ६ इन्च एफएचडी एसए मोडल डिस्प्ले रहेको छ । ग्यालेक्सी ए ६५.६ इन्च एचडी एसए मोडल डिस्प्लेको साथ उपलब्ध रहेको छ । त्यसै गरी ए सिक्स तथा ए सिक्स प्लसमा स्लीककब्र्स रहेको छ । यो आकर्षक स्टाइल तथा सहज रुपमाहातमा अटाउने खालको एरोनोमिक डिजाइन रहेको छ । ग्यालेक्सी ए सिक्स तथा ए सिक्स प्लसको इन्फिनिटि डिजाइनले ठूलो डिस्प्ले एरिया प्रदान गर्दछ । पातलो, हलुका तथा होम बटनको सट्टामा सफ्टवेयर पावर्ड इन डिस्प्ले होम बटन हुनु यसको विशेषता रहेको छ ।
सहजताको लागिफिङ्गर सेन्सर बटनलाई पछाडिको भागमा लगिएको छ । डिस्प्ले हार्डवेरमा गरिएको परिवर्तनले १८.५ः९ को एसपेक्ट रेसियो प्रदान गरेको कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई विशेष दृश्यको अनुभव प्रदान गर्नेछ । आइ एम विजका प्रमुख प्रणय रन्त स्थापितले ग्यालेक्सी ए सिक्स तथा ए सिक्स प्लस युवा पिंढीलाई विशेष ध्यानमा राखेर तयार पारिएको बताए ।
सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्लेको साथ, शानदार अनुभव प्रदान गर्ने उनले बताए । ए सिक्स प्लसमा डुयल रियर क्यामरा रहेको छ । जसको मद्दतले प्रयोगकर्ताले छुट्टै व्यावसायिक तस्वीर खिच्न सक्नेछन् । प्राइमरी रियर क्यामरा १६ मेगा पिक्सल तथा एफ–१.७ अपर्चरको साथ रियर क्यामरा ५ मेगा पिक्सल एवम् एफ– १.९ को अपर्चरको साथ उपलब्ध छ । ग्यालेक्सी ए सिक्स प्लस तथा ए सिक्सको नेपाली मूल्य क्रमशः रु.४४,३९० तथा रु ३९,८९० तोकिएको छ । यो फोन नेपाल अधिराज्यभरका रिटेलहरूमार्फत यही असार ६ गतेदेखि उपलब्ध हुनेछ ।
म्याग्दीको बेनीमा महारानी महोत्सव
मङ्सिर १२।म्याग्दी,म्याग्दीको बेनीमा महारानी महोत्सव सुरु भइरहेको छ । बेनी नगरपालिका–६ मा रहेको महारानी […]
यस्तो छ गाडीभित्र भेटिएको शव प्रकरणको नालिबेली
काठमाडौँ । हराएको ३३ केजी सुन पत्ता लगाउनका लागि उर्लाबारी नगरपालिका ७ का ३५ वर्षीय सनम शाक्यको जंगलमा […]
मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी
काठमाडौँ, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएका सुझाव समेटेर संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति […]
गैर आवसिय नेपाली संघको उम्वेद्वारहरूको नामावली सार्वजनिक
सनेपालन्युज सिड्नी । गैर आवसिय नेपाली संघ ले आसन्न निर्वाचनका लागि उम्वेद्वारहरूको नामावली सार्वजनिक […]
निर्मल निवासमा किन बस्दैनन् पारस ?
काठमाडौं । पारिवारिक कलहले लामो समयसम्म छुट्टएिर बसेका पूर्वयुवराज पारस शाह र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह गत […]